Home News Dad badan oo ku geeryooday shil gaari oo ka dhacay Magaalada..
Dad badan oo ku geeryooday shil gaari oo ka dhacay Magaalada..
Dad gaaraya 33 qof ayaa ku dhaawacmay, oo ay ku jiraan muwaadiniin u dhashay dalalka, UK, Maraykanka, Canada, faransiiska, Netherlands iyo Spain.
Darawalkii gaariga ayaa warbaahinta maxalliga ah u sheegay in uu gaariga u waday si aayar ah balse uu xakamayn kari waayey waddada oo qoyanayd awgeed. goobjoogeyaal ayaa sheegay in gaarigaasi uu isku dayey in uu dhaafo gaari kale.
Gaariga baska ah oo ay lahayd sharikad dawli ah oo lagu magacaabo Viazul ayaa siday 40 rakaab ah, oo ay ku jiraan 22 ajaanib ah.
Shilka ayaa ka dhacay inta u dhaxaysa magaalooyinka Bariga dalkaas ku yaala ee Baracoa iyo Guantánamo
Dadka waxyeelladu gaartay ayaa waxaa kamid ahaa laba haween ah oo u dhashay dalka Argentina, oo 35 jirro ah, haweenay jarmalka u dhalatay oo 59 jir ahayd iyo nin Faransiiska u dhashay oo 67 jir ah, sida laga soo xigtay Raadiyaha Guantánamo oo liiska daabacay.
Shilalka gawaarida ayaa aad ugu badan Cuba kuwaas oo dhaliyey ku dhawaad 4,400 oo dhimasho ah, tan iyo sanadkaan.